I-Aries kunye neGemini-Ukuhambelana kwiSini, Uthando kunye noBomi - Iiary
Aries kunye neGemini
Ukuhambelana kwe-Aries kunye neGemini kuThando, uBomi, isondo, unxibelelwano, ubuhlobo kunye nokuthembela. x
Aries & GeminiUkuhambelana ngokwesondo kunye nobudlelwane obusondeleyo
Xa u-Aries kunye neGemini bebandakanyeka kwizenzo zesondo, ngubani owaziyo apho banokuphela khona. Ngeengcamango ze-Aries 'libido kunye ne-Gemini, zinokuba nobuchule obukhulu kakhulu kwaye zigwetywe kabuhlungu ngokusingqongileyo. Yinto entle ukuba bobabini abakhathali kangako malunga nezimvo zabanye. Kumfanekiso wayo ophilileyo, oku kuninzi kudibene nothando, amandla kunye nomdla. Kwimeko engaphilanga kangako, ubudlelwane babo bokwabelana ngesondo bunokuzala ngamagama amabi kunye nochuku. Into entle kukuba akukho novelwano kakhulu kwaye kulula ukwenzakaliswa, ke oku kunokuba mnandi kwaye kuhluke kumava abo omabini.
Ekubeni i-Aries ingumlo ngokwemvelo, indlela ye-Gemini yokulala ngesondo ingaba yinto edlalwa kakhulu kwincasa yabo, kodwa oku kudla ngokuphela de bavule umdlalo ongunaphakade onikezelwa ngumlingani weGemini. Injongo yabo ephambili kukuba bahlale bengenakunqandwa ngokusemandleni, ngoko uphawu lwe-Air lwe-Gemini lunokunika i-oksijini kuMlilo we-Aries.
Aries & GeminiThembela
Ukungathembi mhlawumbi yeyona ngxaki inkulu kobu budlelwane. Aries unomdla, ulawulwa nguMars kwaye mhlawumbi unomona kakhulu. Gemini ilawulwa yiMercury, i-zodiac's trickster, ehlala etshintsha ubuso abanxibayo kwihlabathi. Uninzi lwabameli beGemini abaqapheli ubuntu babo obusisiseko, beqinisekile ukuba batshintsha ubuntu ngobusuku. Nangona oku kungeyonyani ncam, ingqiqo yokuba i-Aries inokuyifumana kubo ayisiyiyo ncam iresiphi yokuthembela. Ngenxa yoko, i-Aries inokuba nomsindo, i-Gemini iphazamisekile kwaye ikude, ukuya kwindawo apho i-Aries iqala ukukhangela elinye iqabane nokuba ubudlelwane abuzange buphele kwaye iGemini ayisayi kukhathalelwa.
Aries & GeminiUnxibelelwano kunye nengqondo
U-Aries akayiyo nje inkosi yobugcisa bencoko. I-Gemini luphawu olulawulwa yi-Mercury kunye nencoko ngomxholo wabo oyintloko wobomi. Nokuba bathetha ngaphantsi kwe-Gemini eqhelekileyo eqhelekileyo, incoko yabo yangaphakathi kufuneka ibe sisityebi. Omabini amaqabane kufuneka asondele kubudlelwane ngokungathi umntu weGemini wayekhona ukufundisa u-Aries indlela yokuncokola kakuhle. Ekubeni uGemini ethanda ukuba nendima katitshala kwaye ethanda ukuba kubudlelwane apho iqabane labo lifunda okuthile kubo, oku kufuneka kube yindlela efanelekileyo kubo bobabini. Oko kukuthi, i-ego ka-Aries ivumela le ndima yokuzithoba.
Sekunjalo, sonke siyazi ukuba kukho abameli beGemini abathetha nje kakhulu malunga nantoni na ebalulekileyo. Oku kuya kuba sisizathu sokuba i-Aries ilahlekelwe ngumsindo kwaye icinge ngeqabane labo njengento engaphezulu kunye nesidenge. Oku kulahlekelwa yintlonipho kubi ngokwenene kwi-ego yabo, ekubeni isigqibo sokuba kunye neli qabane yayisesabo kwasekuqaleni. Bafanele bakhumbule ukuba kusoloko kukho umntu ehlabathini ongayi kucinga ngale Gemini ithile njengesidenge kwaye wonke umntu ufanelwe kukuba nomntu ongamboniyo ngolu hlobo. Xa oku kungahloniphi kwenzeka kubudlelwane babo, u-Aries kufuneka acinge ngokuvumela i-Gemini yabo ukuba ihambe kwaye ikhangele umntu ofaneleka ngakumbi.
Aries & GeminiIimvakalelo
Ummandla weemvakalelo ngummandla onenkohliso kwesi sibini. Iqabane le-Aries lineemvakalelo ezifudumeleyo, ezinomdla kunye nengxaki yokuzivakalisa. I-Gemini kaninzi ayingeni nzulu kakhulu ngaphantsi komphezulu ukujonga iimpawu ezifihlakeleyo zomntu kwaye ayikho ngokwenene loo mvakalelo ngokwemvelo. Ke lo ngumxube weqabane elinovakalelo elingakwaziyo ukunxibelelana ngendlela abaziva ngayo, kunye nengqiqo ethetha ngayo yonke enye into. Into enhle kukuba i-Aries ayinakuswela ubukhali bokuguqula ingqalelo yeGemini kubo kwaye ibenze baphulaphule. Xa bekwazi ukudibanisa kwingxoxo eyakhayo, kunokwenzeka ukuba bacacise omnye komnye apho bemi khona kunye nendlela abavakalelwa ngayo, kwaye ngale ndlela ibeka isiseko esihle sokutshintshiselana ngokweemvakalelo kwixesha elizayo.
Aries & GeminiImilinganiselo
Xa ubala into yokuba i-Aries ixabisa ukukwazi komntu ukucaca kunye nokucacileyo, kunye nesidingo sikaGemini sokuthetha malunga nayo yonke into, kubonakala kucacile ukuba oku akuwona umdlalo ogqibeleleyo. Ngoku khawucinge ngeGemini. Kunzima ukucinga ngayo nayiphi na imilinganiselo yabo ngaphandle kwento yokuba baxabisa yonke into enomdla, kwaye oku luhlobo lokungaqondi kuba bafumana phantse yonke into enomdla. Ewe oku akuyonyani ncam. Amaqabane eGemini axabisa ulwazi kunye nobuchule bomntu boqobo, kunye nengqondo entle enengqondo. Le nto i-Aries inokuzalisekisa kwinqanaba elithile, ukuba abaphenduli kwimpembelelo kuyo yonke into ethethwa nguGemini.
Akunzima ukuba la maqabane aphendule kwiimfuno zomnye nomnye, kodwa ukuba ababelana ngemfundo efanayo, umdla kunye namandla obuntu, banokubonana bengalufanelanga uthando lwabo.
Aries & GeminiImisebenzi ekwabelwana ngayo
I-Gemini yinto yonke yemisebenzi kodwa imisebenzi ethile iphambene, kwaye i-Aries iya kuziva ikhululekile kolu budlelwane. Kunzima ukutsho ukuba ngubani oya kukhokela kwaye ngubani oya kulandela, njengoko i-Aries ihlala ikhokela ngaloo mandla e-athomu, ngelixa i-Gemini ihlala iza neengcinga ezintsha kunye nenyathelo. Bayakhuthazana kwaye bacele umngeni omnye komnye ngalo lonke ixesha kwaye bobabini abakhe bathi hayi. Ukhetho lwemisebenzi i-Aries eza nayo kufuneka ibe ndlongondlongo ngokwenene kwaye ihlekisayo ukuba iGemini ingazibandakanyi. Ukuba i-Gemini icinga ngento enokuthi i-Aries ingathanda ukuyinqaba, i-ego yabo ayiyi kubavumela kwaye baya kukhwela kuyo nayiphi na into, ukubonisa nje ukuba banako. Olu lonwabo lungaka lufanele lulandelwe kukuphumla okwaneleyo kunye nexesha elichithwe ekhaya.
Uluvo ngokubanzi lwesi sibini luya kuba luhle, lube mnandi kwaye lube ngumngeni, ubudlelwane apho omabini amaqabane anokufunda okuninzi kwaye asebenze ngendlela enempilo. Ingxaki ephambili ngokubandakanyeka kwabo kwezothando kukungabikho kokuthembana, ngakumbi ukuba iqabane lika-Aries linamathele kakhulu kwiGemini, lihlala lilwela inkululeko yabo. Isidingo incoko eninzi essence mkhulu kunayo nayiphi na imiba elungileyo okanye embi kubudlelwane babo kwaye bobabini kufuneka bahlale becinga. Ngokubanzi, kukho ithuba elikhulu laba babini baya kuphelela kunye, kuba uthando lwabo lokwabelana nge-adventure lukhulu kuneengxaki zabo ezininzi.
Aries Khetha Uphawu Khetha Uphawu I-Capricorn Isagittarius